टिभी श्रृंखला "हराएको": अभिनेता र भूमिकाको, कथा
बाह्र वर्ष दुवै टेलिभिजन श्रृंखला "हराएको" को पहिलो सिजन सुरु, त्यसपछि बितिसकेको छ (रूसी मा, त्यो शीर्षक "हराएको" अन्तर्गत प्रकाशित)। 19 लाख दर्शकहरूलाई पहिलो श्रृंखला साक्षी। यसको मूल्याङ्कन कम थिएन परियोजना, सबै भन्दा अन्तिम सिजन अन्त गर्न एबीसी च्यानल को इतिहास मा सफल रूपमा मान्यता, र श्रेणी "सर्वश्रेष्ठ नाटक शृंखला" मा 2006 मा "गोल्डन ग्लोब" जित्यो थियो।
के टिभी श्रृंखला "हराएका" थियो? अभिनेता र भूमिकाको, आफ्नो महिमा, धेरै दर्शकहरु द्वारा प्रेम गर्नुभयो। परियोजना मा सहभागी कलाकार केही लागि मात्र व्यावसायिक काम मा सुरु, तर पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन थियो। के अब मुख्य भूमिका खेलेका अभिनेता संलग्न छ? र तिनीहरूले कसरी यो ठूलो मात्रा टिभी परियोजनामा सहभागिता असर?
कहानी मा, विमान 48 यात्रु जीवित रहन प्रयास, जीवन को नयाँ अवस्था भिज्न, एक मरुभूमि टापुमा हुन बाध्य दुर्घटना, पछि बचे। तर, यो ठाउँमा हुनुको, तिनीहरूलाई को न अज्ञात संग मुठभेड थाह थियो।6मौसम भन्दा प्रत्येक वर्ण लाग्छ हुनेछ: बचेका माझमा थिए यात्रु "के भाग्य यो वीरान टापुमा सँगी पीडित संग ल्याए": "। हराएको" गर्भवती, अधिकारी, पक्षाघात, एक घुमाव, आपराधिक, एक डाक्टर र परियोजना को अन्य वर्ण
श्रृंखला अभिनेता अब लेखकहरूले ध्यान भविष्य एपिसोडको आफ्नो सामग्रीबाट पनि लुकाइन् कि पहिचान, सबै हामी आफ्नो वर्ण को उपस्थिति, सर्जकलाई पनि विज्ञापनहरु मा प्रयास जसमा स्पोइलरहरूबाट बिना लिपि, मात्र भाग पाए। षड्यन्त्र प्रत्येक श्रृंखला escalated संग, कथा भ्रमित बनन थियो र कुनै एक परियोजना को लापता सुरक्षित थियो।
यस श्रृंखला को अन्तिम प्रसङ्ग, एक चलाउनु कारण विवादित प्रतिक्रियाहरू धेरै गोल, तर निर्माताहरू सबै सही गरेको छ भन्ने विश्वास गर्छन्।
ज्याक Shephard रूपमा मत्ती फक्स
फक्स अन्ततः टिभी श्रृंखला डा जैक हृ € ोफर्ड प्ले Sawyer को भूमिका मा आफूलाई खोजे। मूलतः यो नायक पहिलो श्रृंखला मा मृत्यु, तर चरित्र दर्शक यति रुचाउनु छ र सबै भन्दा चालक, यो शो को मुख्य वर्ण को एक बनाउन निर्णय थियो इरादा थियो।
अभिनेता "लस्ट" श्रृंखला आफ्नो अन्तिम धारावाहिक अनुभव हुनेछ स्वीकारे, तर चलचित्र मा यो प्रायः देख्न सकिन्छ। आफ्नो फिल्म सबैभन्दा सफल को एक "सहूलियत बिन्दु।" मानिन्छ वजन फिल्म लागि 22 किलो "एलेक्स क्रस," मत्ती संवाददाता सुरुमा स्क्रिनमा आफैलाई चिन्न थिएन बताए। त्यहाँ चलचित्र "दुनिया Z» र अन्य फिलिम परियोजनाहरूको युद्ध अर्को सानो भूमिका थियो।
पैसा बनाउन, तर सार्वजनिक व्यक्ति हुन - - फक्स अनुसार, उहाँले एक चिन्न व्यक्तित्व, यो फिलिम को मुख्य उद्देश्य हुन मन छैन सजिलो छ।
एक छोरा र एक छोरी - एक सताब्दी अभिनेता को बारेमा एक चौथाई उहाँले दुई सन्तान जसलाई आफ्नो classmate मार्गरेट, विवाह गरे।
Evandzhelin Lilli Keyt Ostin र उनको
Keyt Ostin क्यानाडा अभिनेत्री Evandzhelin Lilli प्ले। निरन्तर एक मोडेल, एक उडान परिचर, र एक महिला बेरा भ्रमण गर्न जब समय परिवर्तन र थियो जो एक जवान महिला लागि, Keyt Ostin को भूमिका जस्तै यो ठूलो मात्रा परियोजना मा एक सफलता थियो "हरायो।" अभिनेता र परियोजना को लेखक सधैंभरि उनको जीवन परिवर्तन भयो।
केही वर्ष Evangeline नै परियोजना मा चार्ली खेलेका डोमिनिक Monaghan, भेटे। डोमिनिक चुनिएको अभिनेत्री संग तोडने पछि "हराएको" को सहायक निर्देशक थियो, त्यो उनको बच्चाहरु को पिता भयो।
अभिनेत्री परोपकारी कामहरू गर्न, सिनेमा छोड्ने योजना थियो, तर पहिलो चलचित्र संग "रियल इस्पात" मा बेली द्वारा प्ले स्क्रीन, मा फिर्ता छ फिलिम पछि Hyu Dzhekmanom, द Hobbit को ट्रिलजी र त्यसपछि एल्फ Tauriel को छवि embodied छ, र 2015 एक प्ले फिल्म "कमिला-पुरुष" मा मुख्य भूमिका।
अब अभिनेत्री जीवन एकदम खुसी छ, तर उनको लागि मुश्किल कुरा भन्छन् - अतिरिक्त वजन विरुद्ध लडाई, किनभने यसको हलिउड सौन्दर्य स्तर पूरा हुनुपर्छ भनेर।
Dzhosh Hollouey र आफ्नो चरित्र Sawyer
Dzhosh Holouey अन्तिम प्रसङ्ग पछि पिच लाग्यो, तर यसको सट्टा अन्य फिलिम निर्माण मा शूटिंग संग पकड आउन निर्णय गरे। तथापि, सबै वर्ण छैन त भंगशील र charismatic Sawyer ( "हराएको") को रूपमा प्रसिद्ध थिए। ": भूत प्रोटोकल मिशन असंभव" र आफ्नो सबैभन्दा सफल चलचित्र अनुभव छ टम क्रूज साथ अभिनेता मा तारा अङ्कित। अर्को असफल थिए, र "कृत्रिम खुफिया" "यस वर्षको युद्ध" एक सिजन पछि बन्द गर्दैन। यस वर्ष को जनवरी टेलिभिजन श्रृंखला "द कलोनी" शुरू मा, यो यो अभिनेता को अन्तिम प्रयास गर्न मद्दत गर्नेछ आशा छ।
जोश यसको वर्तमान व्यक्तिगत जीवन को दावा: उहाँले एक राम्रो पत्नी र छ वर्ष पुरानो छोरी Yessika छ।
Horhe Garsiya - उर्फ हर्ले
ह्यूगो Reis (वा हर्ले) अभिनेता द्वारा प्ले Horhe Garsiya। आफ्नो युवा एक मान्छे क्याफे र छिटो खाना आउटलेटहरू काम, राम्रो खाना को धेरै रुचाउनु भएको थियो। जर्ज यस कमी को एक परिणाम मर्यादा मा गरिएका रूपमा अतिरिक्त वजन संचित छ। श्रृंखला ज्ञात अघि, खडा-अप धन्यवाद गर्न शो, र "हराएको", आशावादी हरुवा एक प्रकारको, भूमिका विशेष गरी उहाँको लागि लेखिएको थियो।
अब गार्सिया "एक समय भएपछि माथि" श्रेणीमा star जारी छ, "हवाई 5.0"। आफ्नो प्रेमिका - लेखक बेथानी लेइघ छहारिलो।
टेरी O'Quinn - Dzhon Lokk
टेरी भयो यूहन्ना Locke यो कलाकार अन्तर्गत लेखे गर्ने अर्को चरित्र छ रूपमा, अचम्मको छैन। Locke को कहानी मा अमान्य एक कुर्सी गर्न सीमित थियो, र त रूपमा अभिनेता को छवि सेट मा आफ्नो comrades आफ्नो दूरी राखिएको नष्ट छैन। यसबाहेक, त्यतिबेला आफ्नो परिवार (श्रीमती र दुई छोरा) हवाई सारियो।
O'Quinn आफ्नो सफलता खुसी, र यो सडक नाम Locke सोच्छ मा अझै पनि छ भने पनि पहिचान को सर्वोच्च उपाय छ।
मा अभिनेता को खाता थप सय एक भन्दा काम र उहाँले अभिनय अन्त गर्न जाँदै छ।
श्रृंखला अभिनेता फिलिम पछि संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो परिवारका साथ फर्के, तर त्यहाँ टेरी O'Quinn पत्नी छोडेको guesses छन्।
डोमिनिक रबर्ट डी बोरान
अभिनेता डोमिनिका रबर्ट डी बोरान - - "हराएको" बाट चार्ली देखि Merry रूपमा ज्ञात थियो "अंगूठियहरुको प्रभु।" साथै फक्स Sawyer को भूमिका को लागि auditioned, तर भूमिका प्रस्ताव थियो, चार्ली केटा।
शुरुआत: डोमिनिक "एक्स-पुरुष आफ्नो शस्त्रागार उत्परिवर्ती बोल्ट भूमिका मा, फिलिम मा कार्य जारी छ। वोल्भेरिन ", एमिनेम र Rihanna को क्लिप को शूटिंग। क्षणमा, टेलिभिजन श्रृंखला "कोड 100" काम।
गतिविधि अभिनेता अभिनय बाहेक भारत प्रकृति को एक सक्रिय रक्षक यसको आफ्नै जंगल छ, र भर्खरै पत्ता माकुरा प्रजाति डोमिनिक को सम्मान मा नाम थियो। रबर्ट डी बोरान विवाह छैन।
नवीन Endryus, भारतीय मूल भनिन् ( "हराएको") को रूपमा जानिन्छ एक Briton। यस श्रृंखला मा अभिनेता इराकी सैन्य प्ले, र सुरुमा यो चरित्र नन बरु आदिम र monotonous देखिन्थ्यो, तर दर्शक सहानुभूति धेरै थियो त्यसैले समय नायक खोलिएको थियो। Sam नन श्रृंखला, छैन हेर्न मात्र षड्यन्त्र को सार पहिलो श्रृंखला हेर्नुभयो बुझ्न भनेर तर्क छ।
अब अभिनेता चलचित्रहरू र धारावाहिक मा सक्रिय छ। ": प्रेम कथा डायना" नाओमी Uots आफ्नो नवीनतम काम एक फिल्म "द बहादुर एक" Dzhodi फोस्टर र साथ छ।
तथापि, नन गोपनीयता छैन त भाग्यमानी, चलचित्रहरू मा जस्तै छ। उहाँले एन्ड्रयूज देखि एक अस्थायी अलग समयमा अर्को अभिनेत्री, Elena Eustache द्वारा एक छोरा थिए, अभिनेत्री Barbaroy Hershi संग लामो बैठक भएको थियो। अन्तमा Hershey संग जानेबेलामा पछि यहोशूले Elena छोरा को जिम्मा सही जफत। साथै, एन्ड्रयूज एक हुर्किसकेका छोरा छ।
एमिली डी Revin
एमिली डी Revin एक गर्भवती क्लेयर प्ले। अभिनेत्री सबै मौसम हेरोइन एमिली जन्म बच्चालाई को स्थिति, वा लिइरहेको हेरविचार थियो लागि साहसिक एपिसोड भाग सक्छ, तर यो एक आमा, आफ्नो बच्चा को रक्षक, त्यसैले श्रृंखला लागि यो चरित्र र बहुमूल्य रूपमा प्रकट भएको थियो "हरायो।" अभिनेता नै डी Revin यो राय साझेदारी गर्नुहोस्।
फिलिम फिल्म गोली पछि "सार्वजनिक दुश्मन", "मलाई सम्झना"। क्षणमा उहाँले Belle खेल्छ जहाँ, "एक समय भएपछि माथि" श्रेणीमा कब्जा।
उहाँले 10 वर्षसम्म बस्ने कोसँग पूर्व-पति, अभिनेता Dzhonom Yanovichem, छोडपत्र।
अन्य अभिनेता "हराएको" ( "हराएको")
कोरियाई सुंग को भूमिका अभिनेत्री दिइएको थियो Yunjin किम, Keyt Ostin को भूमिका को लागि सुरुमा auditioned गर्ने। अंग्रेजी पति सिकाउँछ जो अधीनमा पत्नी, - श्रृंखला, गीत को प्लट अनुसार।
परियोजना मा काम समयमा लोकप्रिय थिए जो एशियाली श्रृंखला, मा गोली थियो पहिले।
Jeong Hyun पाक, विवाहित यो दिन छ जो संग - अन्तिम प्रसङ्ग को फिलिम पछि, अभिनेत्री किम को पति प्रबन्धक भयो।
हाल टिभी श्रृंखला "Mistresses" मा मुख्य भूमिका को एक संलग्न।
डा Dzhulet Berk Elisabetta मिशेल प्ले। , अभिनेत्री हिट शूटिंग टेलिभिजन श्रृंखला को एक उत्सुक प्रशंसक रहेको मा "हरायो।" गर्भावस्था जडानमा, Elisabetta भावनात्मक भारी र रक्तपातपूर्ण एपिसोड परहेज, दोस्रो सिजन हेर्न भएन। र त्यो जूलियट को भूमिका प्रस्ताव थियो, त्यो उनको श्रीमान् र छोरा त्यो श्रृंखला को अभिनेता द्वारा भेट भएको थियो जहाँ हवाई, मा शूटिंग गए आफ्नो राम्रो भाग्य विश्वास गर्न सकिएन, र, सँगै "हरायो।"
को श्रृंखला पछि, Elisabetta Mittchell अन्य तीव्र भूमिकाको श्रृंखला "लाइन पार", र "पर्यटकहरू" "एक समय भएपछि माथि" प्ले।
तर, अप्रिय परिवर्तन गरिएको छ, र मेरो श्रीमान् र म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा छोड्न थियो।
इयान Somerhalder जो नामको खराब धनी जवान प्ले छ परियोजना, पहिलो थियो Bun Karlayl। बोन आफ्नो एउटा मरुभूमि टापुमा आफूलाई फेला आधा-बहिनी शान्नोन (Maggie ग्रेस अभिनेत्री, त्यहाँ तिनीहरूले फिलिम को समयमा भेट थियो कि एक संस्करण हो)। Somerhalder चरित्र पहिलो श्रृंखला को मुख्य नायक मृत्यु भएको थियो, तर मान्छे त सेट मा आफ्नो टोलीका साथी बनेको छ, र आफ्नो चरित्र दर्शक द्वारा मनपराएका छ, यो वर्ण इयान दस श्रृंखला दिन निर्णय भएको थियो।
यस श्रृंखला को अन्त गरेर परियोजना मा खेलेका "हराएको" अभिनेता, कहिलेकाहीं तिनीहरूले प्रसिद्ध मात्र यो शो धन्यवाद भयो, तर इयान Somerhalder को लोकप्रियता बढेको कारण अन्य कुनै कम प्रसिद्ध अभिनेता शीर्षक भूमिका खेलेका जहाँ श्रृंखला "द पिशाच डायरीहरू", - एक साहसी सुन्दर vampire Damon Salvatore, निराशा Elena गिल्बर्ट (नीना Dobrev) प्रेम।
लामो समय को लागि अभिनेता नीना Dobrev भेटे, तर दम्पतीले parted। 2015 मा इयान "गोधूलि" (Nikki रीड) मा Rosalie खेलेका अभिनेत्री, विवाह गरे।
अन्ना-Lyusiyu Kortes को अतुलनीय Mishel Rodriges, "फास्ट र अति क्रुद्ध," "निवास दुष्ट", "अवतार" र "machete जस्ता चलचित्रहरू लागि सबै भन्दा राम्रो ज्ञात द्वारा प्ले।" फिलिम को समयमा, मिशेल पहिले नै प्रसिद्ध अभिनेत्री थियो, र शीर्ष 100 sexiest महिलाहरु मा पायो। द्वीप व्यवस्था र अर्डर रक्षक थियो हान्न अन्ना लुसिया, र आफूलाई अन्य बचे एक महत्वपूर्ण अवस्थामा फेला, misfortune आफ्नो comrades बचत गर्न खोजे।
अभिनेत्री एक tumultuous व्यक्तिगत जीवन दावा: उनको मात्र होइन मानिसहरूसँग तर पनि महिलाहरु संग सम्बन्ध देख्यौं। हुनत यी सम्बन्ध फरक छैन अवधि थिए र अब अभिनेत्री मुक्त छ देखि उनको पछिल्लो प्रेमीहरूको, Vin डीजल र zaka Efrona छुट्याउन सक्नुहुन्छ।
यो श्रृंखला "हराएको" अभिनेता, फोटो
भूमिकाको (अभिनेता) (दायाँ बायाँ) को श्रृंखला को: Keyt Ostin (Evandzhelin Lilli), Dzhek हृ € ोफर्ड (Mettyu Foks), Sawyer (Dzhosh Hollouey), रवि (Yunjin किम), चार्ली (डोमिनिक रबर्ट डी बोरान), Sayid (नवीन Endryus)।
Dzhek हृ € ोफर्ड (Mettyu Foks) र Keyt Ostin (Evandzhelin Lilli) - महिमा को शिखा मा।
Sawyer (Dzhosh Hollouey) र Dzhulet Berk (Elisabetta मिचेल) - ठूलो tandem।
चार्ली (डोमिनिक रबर्ट डी बोरान), क्लेयर (Emilie डे Revin), हर्ले (Horhe Garsiya) - मुख्य वर्ण को एक।
Dzhon Lokk (टेरी O'Quinn) - को charismatic र रहस्यमय चरित्र।
Sayid (नवीन Endryus), को श्रृंखला को धेरै दर्शकहरु को एक मनपर्ने।
बोन (इयान Somerhalder) - को श्रृंखला को सबै भन्दा charismatic अभिनेता को एक।
सुन्दर व्यावसायिक अभिनेता द्वारा प्ले अक्षरहरू को अविस्मरणीय चित्र, प्रशंसक को हृदयमा बाँकी सनसनीपूर्ण श्रृंखला।
Bela Talbot: वर्ण र को भूमिका खेलेका
को कमेडी मा "साल एक," अभिनेताहरु को बाइबलीय कथा विकृत संकोच छैन
Dzhozef गर्डन Levitt: Filmography र जीवनी
"Kuleshov प्रभाव" - एक फिलिम-पाठयपुस्तक भत्ता सिनेमाटोग्राफर
फिल्म र टिभीमा श्रृंखला "Braveheart": अभिनेताहरु को भूमिका
"पार्क हाउस" (समारा)। किनमेल केन्द्र र multicomplex "Kinomechta" को विशेषताहरु
थर्मस जो कम्पनी किन्न राम्रो छ? ग्राहक समीक्षा
यसको मालिक को जीवन मा एलियाले को नाम के हो
Estee Lauder प्रसाधन
युरा Movsisyan: क्यारियर र जीवनी
प्रभावकारी प्रविधी र साधारण गल्ती: तनाव कसरी कम गर्ने
Taimyr प्रायद्वीप। को Taimyr प्रायद्वीप को climatic सुविधाहरू
हामी राजनीतिक साक्षरता बढ्छौं: रेफ्रिजमले निर्वाचनबाट कसरी फरक छ?
मा रूसी साहित्य पुस्तामा बीचको सम्बन्ध को समस्या
Georg Trakl: जीवनी र काम
मान्यता कार्यक्रम कसरी काम गर्दछ?
KamAZ 54112: वाहन को सामान्य विशेषताहरु